ကမ္ဘောဒီးယား ၊ အင်ဒိုနီးရှား နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့က နိုဝင်ဘာလတွင် အရေးပါသော ခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေး ၃ ခု ကျင်းပရန်ရှိ - Xinhua News Agency
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ဖနွမ်းပင်မြို့၌ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင် ၊ မေ ၅ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် ယခုနှစ်တွင် အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွင်း အရေးပါသော ခေါင်းဆောင်များ အစည်းအဝေး ၃ ခု ကျင်းပသွားရန် စီစဉ်ထားကြောင်း မေ ၄ ရက်တွင် အဆိုပါသုံးနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနများက ထုတ်ပြန်သော ပူးတွဲကြေညာချက်အရ သိရသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း(အာဆီယံ) နှင့် ဆက်စပ်အစည်းအဝေးများအား နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်မှ ၁၃ ရက်အထိ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နှင့် ၁၆ ရက်တို့တွင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံသည် အာရှ-ပစိဖိတ် စီးပွါးရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု(APEC) စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များ၏ အစည်းအဝေးအား နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရက်နှင့် ၁၉ ရက်တို့တွင် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အာဆီယံ ၊ G20 နှင့် APEC လုပ်ငန်းစဉ်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း နှင့် ဒေသဆိုင်ရာ စုပေါင်းအစီအစဉ်များအား ပူးပေါင်းမြှင့်တင်ရန် ပါဝင်သူများအားလုံးအတွက် ထူးခြားသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် တူညီသောအင်္ဂါရပ်များကို မျှဝေပြီး ပြည်သူများအားလုံးအတွက် ငြိမ်းချမ်းမှု ၊ သာယာဝပြောမှု နှင့် ရေရှည်တည်တံ့ပြီး အားလုံးပါဝင်သော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိစေရန် တူညီသောအခွင့်အရေးများကို မျှဝေပေးခဲ့ကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
လာမည့်အာဆီယံထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မသေချာမရေရာမှုများကြုံတွေ့နေစဉ်အတွင်း အာဆီယံ၏ ခံနိုင်ရည် အားကောင်းလာစေရန် ခေါင်းဆောင်များ၏ သန္နိဋ္ဌာန်အား သိမြင်စေပြီး ဒေသတွင်း ဗိသုကာပုံစံတွင် အာဆီယံ၏ ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍအား ဆုပ်ကိုင်ထားကြောင်း ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယင်းမှာ COVID-19 ရောဂါရိုက်ခတ်မှုများမှ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ပူးပေါင်းကြိုးပမ်းမှုများကို အရှိန်မြှင့်တင်ရန်လည်း ဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် အားလုံးအတွက် ခိုင်မာအားကောင်းပြီး ခြုံငုံမိသော နာလန်ထူခြင်းအား လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက G20 သည် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များသာမက ကမ္ဘာ့တစ်ခုလုံး အထူးသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအတွက်လည်း သက်ဆိုင်သည်ကို မိမိတို့ ကတိပြုကြောင်း ဖြည့်စွက်ဖော်ပြထားသည်။
“ဦးစားပေးနယ်ပယ်သုံးခု သတ်မှတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဗိသုကာပုံစံ ၊ ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ကူးပြောင်းရေး နဲ့ စွမ်းအင်အကူးအပြောင်းများကို အားကောင်းလာစေရေးတို့ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ G20 က ခိုင်မာအားကောင်းပြီး ခြုံငုံမိတဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ နာလန်ထူရေးအတွက် အထောက်အကူတစ်ရပ်အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။”ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အာရှပစိဖိတ်ဒေသတွင်း စီးပွားရေး၏ ထူးခြားသော ဖိုရမ်တစ်ခု ဖြစ်သည့် APEC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် အကျိုးစီးပွားမျှဝေမှုရရှိရေး ဒေသတွင်းစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုကို မည်သို့ အရှိန်မြှင့်တင်မည်ဆိုသည့်အပေါ်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
“ပွင့်လင်းမှု ၊ တက်ကြွမှု ၊ ကြံကြံခံနိုင်မှု နဲ့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ အာရှပစိဖိတ် အသိုက်အဝန်းအတွက် မျှော်မှန်းချက်တွေကို အဆင့်မြင့်တင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။”ဟု ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်သုံးနိုင်ငံဖြစ်သည့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့သည် ကမ္ဘာ နှင့် ဒေသတွင်း၌ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့် တည်ငြိမ်ရေးအား ထိန်းသိမ်းရာတွင် အာဆီယံ ဗဟိုပြုမှု ၊ အများယုံကြည်လက်ခံနိုင်မှု နှင့် ဆက်စပ်သက်ဆိုင်မှုကို အားကောင်းလာရန် နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစိတ်ဓာတ်အား သေချာစေရန် မိတ်ဖက်များ ၊ သက်ဆိုင်သူများ အားလုံးနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရန် ကတိပြုထားကြောင်း ကြေညာချက်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
## # ##Summit ###ထိပ်သီးအစည်းအဝေး #ဆင်ဟွာ #xinhua #myanmar #xinhuamyanmar
Cambodia, Indonesia, Thailand to host3major leaders’ meetings in November: joint statement
PHNOM PENH, May4(Xinhua) — Cambodia, Indonesia and Thailand are due to host three important leaders’ meetings in the Southeast Asia region this year, according toajoint statement released by the foreign ministries of the three countries on Wednesday.
Cambodia will host the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and Related Summits on Nov. 11-13; Indonesia will host the Group of 20 (G20) Summit on Nov. 15-16, and Thailand will host the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders’ Meeting on Nov. 18-19, the statement said.
The upcoming ASEAN summit expresses the leaders’ determination to strengthen ASEAN resilience in the face of global uncertainties and maintain ASEAN’s central role in the regional architecture, the statement said, adding that it is also to accelerate joint efforts to recover from COVID-19 impacts.
The G20 summit aims to facilitateastrong and inclusive recovery for all, it said, adding that Indonesia is committed to ensuring the G20 is relevant not only for its members but also for the world at large, particularly the developing countries. Su Wint:
“Three priority areas have been identified, namely, strengthening global health architecture, digital transformation, and energy transitions, so that the G20 can serve asacatalyst forastrong and inclusive global recovery,” the statement said.
“It aims at advancing the vision for an open, dynamic, resilient and peaceful Asia-Pacific community,” the statement said.
Photo – ASEAN foreign ministers attend the ASEAN foreign ministers’ meeting (AMM Retreat) in Phnom Penh, Cambodia, Feb. 17, 2022. The meeting kicked off here on Thursday inahybrid format to discuss issues, such as the COVID-19 pandemic, inclusive economic recovery, and relations with dialogue partners. (Photo by Sovannara/Xinhua)